သံစဉ်မဲ့ အလင်္ကာများ: ကိုယ့်ကို မေ့မသွားပါနဲ့
Comment by အပြုံးပန်း — May 27, 2010 @ 5:56 pm |Edit This
စာတွေ ခဏခဏ ရောက်မလာလို့။
Comment by အပြုံးပန်း — May 27, 2010 @ 5:57 pm |Edit This
ကျနော်လည်း အဲ့လို “ကိုယ့်ကို မေ့မသွားပါနဲ့လို့ တစ်ယောက်ယောက်ကို ပြောဖူးသလားလို့ ။ အစ်မလိုပဲ ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး :P
Comment by MgMyo — May 27, 2010 @ 6:10 pm |Edit This
ပန်းလေးတွေ ကို တင်စားထားတာ သိပ်လှတယ်
စာဖတ်သူ ကို ခံစား ထိမိစေတယ်
Comment by Republic — May 27, 2010 @ 7:52 pm |Edit This
Forget-me-nots လား နာမည်ကိုပဲ ရင်းနှီးပြီး သဘောကျနေတာ အပြင်မှာတော့ တစ်ခါမှ မမြင်ဖူးဘူး.. ချစ်စရာလေးနော်.
Comment by သိင်္ဂါကျော် — May 27, 2010 @ 7:57 pm |Edit This
ပန်းပြာပြာလေးတွေကချစ်စရာကောင်းတယ်…….. ပန်းတွေကိုတော့ စွဲစွဲလန်းလန်းနှစ်သက်မိတယ်အစ်မ..။
အစ်မကိုလည်း forget-you-not ပါ… =)
Comment by EvergreenPhyo — May 27, 2010 @ 10:07 pm |Edit This
အပြုံးပန်း.. ရသဆိုတာ.. မလေးတွက် လောလောဆယ်မှာ ရှားပါးပစ္စည်းဖြစ်နေလို့ အပြုံးပန်းရေ..း))
မောင်မျိုး.. အဲလိုပဲ ဘာရယ် မဟုတ်ပါဘူး..
Republic … ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်း)
သိင်္ဂါကျော်.. သေးသေးလေးတွေနဲ့ ချစ်စရာလေးတွေ သူက
EvergreenPhyo... ဒီလိုပဲ ဘလောဂါတွေက တိတ်ဆိတ်သွားတတ်လို့
Comment by မလေး — May 28, 2010 @ 12:36 pm |Edit This
မလေးရယ်.. သတိရတယ်.. forget me not လေးတွေက အစုအစုနဲ့ပွင့်ကြတာမို့ သူတို့လေးတွေ အမေ့ခံရလဲ ဝမ်းနည်းစရာ အဖော်ရှိမှာပါ
Comment by မွန် — May 28, 2010 @ 1:07 pm |Edit This
Comment by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) — May 28, 2010 @ 7:25 pm |Edit This
Comment by phyo thet aung — May 29, 2010 @ 2:50 am |Edit This
အဲ့ဒီပန်းကို နာမည်ကြားဖူးပြီး ပန်းပုံမမြင်ဖူးခင်တကည်းက ကြိုက်တာပါ =)
Comment by shwunmi — May 29, 2010 @ 7:04 pm |Edit This
ချော.. ချောဘယ်တော့လာမလည်းပြေား)
phyo thet aung .. ကျေးဇူးတင်ရမှာ မလေးပါ
ရွှန်းမီ.. မလေးကတော့ နာမယ်ကိုသိပ်မကြိုက်ဘူး.. ပန်းကလေးတွေကိုပိုကြိုက်တယ်ညီမလေး
Comment by မလေး — May 30, 2010 @ 11:43 pm |Edit This
Comment by zwesoelwin — June 1, 2010 @ 10:00 pm |Edit This
မလေး ရဲ့ကိုယ့်ကို မေ့မသွားပါ နဲ့ စာစုလေး လာဖတ်ရှု့ သွားပါတယ်။
ပန်း လှလှလေး တွေ လဲ တိတ်တိတ်လေး ခဏယူသွားပါတယ်။ :)
ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ မလေး ရေ!
Comment by မောင်မောင် — June 2, 2010 @ 11:45 am |Edit This
အိမ်ခဏပြန်သွားလို့ ခုမှလာဖြစ်ပါတယ် မလေးရေ။
“ငါ့ကို မေ့မသွားပါနဲ့” လို့ဆိုတဲ့ ကြယ်ပြာပန်းလေးတွေကို ချစ်တယ်။ မလေးရဲ့စာအဖွဲ့ကလည်း ပန်းလေးတွေလိုပဲ ချစ်စရာပါ။း)
ပန်းတွေစုံအောင်ပွင့်တဲ့ နွေဦးမှာ မလေးပျော်ပါစေ။
Comment by ဇွန်မိုးစက် — June 4, 2010 @ 6:10 am |Edit This
ပန်းတွေစုံအောင်ပွင့်တဲ့ နွေဦးမှာ မလေးတစ်ယောက် ပျော်ရွှင်နေမှာပဲလို့…။
Comment by ဇွန်မိုးစက် — June 4, 2010 @ 6:12 am |Edit This
Comment by Anonymous — June 26, 2010 @ 1:22 am |Edit This